DOWNLOAD MFE GIF ANIMATOR 6.2 MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Mfe GIF Animator 6.2
Nke mbụ, nyochaa ọdịdị nke njikọ ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na motherboard, yana eriri maka ijikọta ihe ndị dị n'ihu. Mgbe ijikọ ya dị mkpa iji hụ usoro ụfọdụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị jikọọ otu ma ọ bụ ọzọ mmewere na usoro na-ezighi ezi, ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ọ bụghị ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ kwatuo usoro dum.
Ya mere, ọ dị mkpa ka ị nyochaa ọnọdụ nke ihe niile dị na mbu. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ntụziaka ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ dị na motherboard, na-akọwa usoro nke ịjikọta ụfọdụ components na osisi. Ọbụna ọ bụrụ na akwụkwọ maka motherboard dị n'asụsụ ọzọ karịa Russian, atụfula ya.
Cheta ọnọdụ na aha ihe niile dị mfe, n'ihi na ha nwere otu ọdịdị na akara. Ekwesiri icheta na ntụziaka enyere na isiokwu ahụ n'ozuzu ya, ya mere, ebe ụfọdụ nke nne na nna gị nwere ike ịdịtụ iche.
Nkeji nke 1: Bọtị bọtịnụ na njirimara
Nke a dị oke mkpa maka ọrụ nke kọmputa ahụ, n'ihi ya, a ga-ebu ụzọ mee ya. Tupu ịmalite ọrụ, a na-atụ aro ka ị kwụpụ kọmputa site na netwọk iji zere ike mgbapụta mberede.
A na-ekenye ihe nkesa pụrụ iche na motherboard, bụ nke a na-eche naanị maka ntinye nke wires nke akara na bọtịnụ. A na-akpọ ya "Oghere n'ihu", "PANEL" ma ọ bụ "F-PANEL". N'ụlọ niile, ọ na-abanye na nke dị na ala, na nso nso ebe a na-eche ihu n'ihu.
Tụlee wires ndị jikọtara na nkọwa ndị ọzọ:
Uhie uhie - iji jikọọ bọtịnụ on / off;
Ncha waya - jikọtara bọtịnụ Malitegharịa ekwentị ahụ;
Igwe na-acha anụnụ anụnụ bụ ọrụ maka otu n'ime egosi ọnọdụ ọnọdụ, nke na-emekarị ka ọ bụrụ na PC amaliteghachiri (na ụdị ụfọdụ nke a abụghị ikpe);
A na-eji eriri na-acha uhie uhie jikọọ motherboard na akara ngosi nke kọmputa.
Ejiri USB dị mkpa iji jikọọ ike.
Mgbe ụfọdụ, uhie uhie na-acha uhie uhie "gbanwee" ọrụ ha, nke nwere ike ịgbagwoju anya, n'ihi ya, ọ dị mma ka ị mụọ ntụziaka tupu ịmalite ọrụ.
A na - ahọrọ ebe maka ijikọ waya ọ bụla na agba ma ọ bụ nwee ihe nchọpụta pụrụ iche nke edere ma na ya n'onwe ya ma ọ bụ na ntụziaka. Ọ bụrụ na ị maghị ebe ị ga-esi jikọọ nke a ma ọ bụ waya ahụ, jikọọ ya na "na enweghị", n'ihi na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmeghachite ihe niile.
Iji chọpụta nhazi nke njikọ USB, jikọọ kọmputa na netwọk ma gbalịa gbanwee ya na iji bọtịnụ na ikpe ahụ. Ọ bụrụ na agbanwụrụ kọmputa ma ọkụ niile na-aga n'ihu, ọ pụtara na ị jikọọ ihe niile n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ọ bụghị, kpochapụ kọmputa ahụ na netwọk ma gbalịa ịgbanwe wiwa na ebe, ma eleghị anya ị rụnyela eriri na eriri na-ezighị ezi.
Nkeji 2: Ijikọta Ihe Ndị Ọzọ
N'oge a, ịchọrọ ijiko njikọ maka USB na ikuku okwu. Nhazi nke ụfọdụ anaghị enye ihe ndị a n'ihu panel, ya mere, ọ bụrụ na ịchọtaghị eriri USB na ikpe ahụ, ịnwere ike ịzọ ụkwụ a.
Ebe maka ijikọ njikọ dị n'akụkụ oghere maka bọtịnụ jikọtara na akara. Ha nwekwara aha ụfọdụ - F_USB1 (nhọrọ kachasị mma). A ghaghị iburu n'uche na ebe ndị a nwere ike ịbụ karịa otu na motherboard, ma ị nwere ike ijikọ na nke ọ bụla. Cables enwere aha - USB ma Ụda olu.
Ijikọ waya ntinye USB yiri nke a: were eriri USB "USB" ma ọ bụ "F_USB" ma jikọọ ya na otu n'ime njikọ na-acha anụnụ anụnụ na motherboard. Ọ bụrụ na i nwere eriri USB 3.0, ị ga-agụ ntụziaka ahụ, ebe ọ bụ na nke a, ị ga - ejikọta eriri naanị otu n'ime ndị jikọọ, ma ọ bụghị na kọmputa agaghị arụ ọrụ na USB-draịva.
N'otu aka ahụ, ịkwesịrị ijikọ USB Ụda olu. Njikọ maka ya yiri ka ọ dị ka ntinye USB, mana enwere agba dị iche ma a na-akpọ ya AAFPma AC90. Emekarị ka ọ dị nso njikọ USB. Na motherboard, ọ bụ naanị otu.
Jikọọ ihe ndị dị n'ihu panel na motherboard dị mfe. Ọ bụrụ na ịmehie ihe, ị nwere ike idozi ya n'oge ọ bụla. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i mezighị nke a, kọmputa ahụ agaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.